Taratasin’i Ayatollah Khomeini: Fitaovam-piadiana Nokleary sy Fiafaran’ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2017 2:46 GMT
Araka ny tatitry ny haino aman-jery isan-karazany, nampahafantatra ampahibemaso an'i Tehran mikasika ny taratasy efa tamin'ny taona 1988 ny filoha teo aloha Hashemi Rafsanjani, izay nanononana ny komandy ambony ao Iran ho nilaza fa mila baomba nokleary i Iran handresena amin’ny ady amin'i Iraka. Nosoratan'ny rain'ny revolisiona Iraniana, Ayatollah Khomeini, ho an'ny manampahefana ambony tamin'ny andro faranytamin'ny ady ny taratasy. Nahasarika ny sain'ireo bilaogera maromaro ity taratasy ity, izay nanoratra momba ny ady, ny fitaovam-piadiana nokleary sy Rafsanjani tamin'ity herinandro ity.
Mohammad Ali Abtahi, bilaogera sady mpanao politika reformista, nilaza fa nanao hetsika feno herimpo tamin'ny famoahana ity taratasy ity sy nampahafantatra izany tamin'ny vahoaka Iraniana i Rafsanjani. Hoy izy nanohy:
Nilaza i Freekeyboard fa nanohina ny taratasin'i Imam Ayatollah Khomeini tamin'ny faran'ny ady Iran-Iraka ny sivana tsy misy dikany tamin'ity indray mitoraka ity. Nilaza koa ity bilaogera ity fa ireo manampahefana nanadino ny teny momba ny fitaovam-piadiana nokleary sy laser dia ireo izay mitaraina ihany fa ny tontolo tandrefana dia tsy mino fa ho amin'ny tanjona mitandro fandriampahalemana fihany ny hetsika nokleary Iraniana [Fa].
Nikahang, mpanao sariitatra, bilaogera sady mpanao gazety malaza nilaza fa efa naniry hanana fitaovam-piadiana nokleary hatramin'ny ady tamin'i Iraka i Iran [Fa]. Fotoana fohy taorian'ny namoahana ilay taratasy, nesorin'izy ireo ny fanondroana ny fitaovam-piadiana nokleary sy laser. Mampahatsiahy ny mpamaky mikasika izay vondrona mahazo tombontsoa amin'ny fitohizan'ny ady ihany koa ilay bilaogera. Maro ireo mpitarika mpiambina revolisionera no tezitra tamin'ny fanekena ny vahaolan'ny Firenena Mikambana sy ny fitsaharan'ady, nanoratra izy fa ilaina ny mahita ny tombony azon'ireo manampahefana tamin'ny ady [Fa]. Nilaza koa ity bilaogera ity fa izay olona te-hampiverina an'i Iran tamin'ny andron'ny krizy tamin'ny taona 80 dia tsy maintsy ireo manana fahatsiarovana tsara momba ireo andro ireo. Araka ny filazan'i Nikahang, tsy mankasitraka ireo taratasy sy antontan-taratasy tsiambaratelo navoaka ny vondrona fondamentalista-mpandala ny nentim-paharazana, satria matahotra izy ireo fa mety hanakana ny lalana hanaovana ady hafa ny fisalasalan'ny vahoaka [Fa].
Nilaza i Blue future fa mampiseho ny taratasy fa ny vahoaka no namarana ny ady, fa tsy ny miaramila na ny mpanao politika. Milaza ity bilaogera ity fa raha ampy ny isa te hirotsaka an-tsitrapo ho miaramila, azo antoka fa hanohy ny ady ny manampahefana [Fa].
Namoaka taratasy nosoratana an-tanana tao amin'ny bilaoginy i Arash Kamagir [Fa] ary nanamarika fa navoaka tao amin'ny tranokalan'i Ayatollah Montazeri taona vitsy lasa izany.
24 ora izayMaraoka